WARBIXIN: Min Santiago Solari, Rual Gonzalez Ilaa Alvaro Morata Oo Ugu Danbeeyay-Wax Ka Ogow Liiska Ciyaartoyda U Soo Wada Ciyaaray Kooxaha Xifiltama Ee Real Madrid & Atletico Madrid. - Raaso News Network ( RNN )
Home » CAYAARAHA CAALAMKA » WARBIXIN: Min Santiago Solari, Rual Gonzalez Ilaa Alvaro Morata Oo Ugu Danbeeyay-Wax Ka Ogow Liiska Ciyaartoyda U Soo Wada Ciyaaray Kooxaha Xifiltama Ee Real Madrid & Atletico Madrid.
Posted by: Bakool Net in CAYAARAHA CAALAMKA 29/01/2019	0
Kooxda Atletico Madrid ayaa dhamaystirtay heshiis amaah 18 bilood ah oo ay Chelsea kaga soo qaadatay gool dhaliyaha reer Spain ee Alvaro Morata kaas oo hadda qayb ka noqday taariikhda ciyaartoyda u soo wada ciyaaray kooxaha magaalada Madrid ku xifiltama ee Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Alvaro Morata ayaa laba jeer Real Madrid u soo ciyaaray wuxuunau soo saftay 63 kulan oo horyaalka La Liga ah kuwaas oo uu ku soo dhaliyay 25 gool intii aanu Chelsea ku soo qaadan hal xili ciyaareed iyo badh uu ku soo dhaliyay 24 gool kadib markii uu saftay 72 kulan.
Laakiin Alvaro Morata ma aha xidigii kowaad, labaad ama ssaddexaad ee u kala gudbay kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid balse waxaa jira liis ciyaartoy magac wayn kubbada cagta ku leh oo u soo wada ciyaaray kooxaha colaada wayni ka dhexayso ee Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xogta liiska ciyaartoydii ka soo wada ciyaaray kooxaha reer Madrid ee Real Madrid iyo Atletico Madrid halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1-Hugo Sánchez: Waxa uu Atletico Madrid ku soo biiray sanadkii 1981 kii wuxuuna u soo dhaliyay 54 gool oo horyaalka La Liga ah kadib markii uu saftay 111 kulan isaga oo gool dhalinta La Liga ku guulaystay xii ciyaareedkii 1984/85 kii.
Laakiin waxa uu ku biiray RealMadird si uu uga caawiyo shankoob oo xidhiidh ah intii u dhexaysay 1986-1990 kii wuxuuna ka mid noqday halyayda kooxda Real Madrid taas oo keentay in colaad looga qaaday qaybta Atletico Madrid.
Hugo Sanchez oo ahaa halyaygii hore ee reer Mexico ayaa Atletico Madrid u soo dhaliyay hal gool tartamada kooxaha Yurub ah kadib markii uu saftay 6 kulan laakiin Real Madrid ayuu 23 gool u soo dhaliyay kadib markii uu 39 kulan ciyaaray oo tartamada kooxaha Yurub ah.
2-Bernd Schuster: Xidigii hore ee reer Germany ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda gaarka ah ee awooday in uu isku badashay kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Atletico Madrid, wuxuuna markii hore ka soo wareegay Barcelona si uu Real Madrid ugu soo biiro laakiin waxa uu xalaad kale ku sii abuuray markii uu Real Madrid ka baxay ee uu haddana Atletico Madrid ka soo jeedsaday.
Bernd Schuster ayaa Barcelona ka soo wareegay sanadkii 1988 kii wuxuuna ku soo biiray Real Madrid wuxuuna Madrid kula guulaystay laba koob oo La liga ah iyo hal koob oo Copa Del Rey ah laakiin sanadkii 1990 kii ayuu Bernd Schuster markale awooday in uu Atletico Madrid ku biiray isaga oo xili ciyaareedkii 1991/92 kii kooxda Atletico ka caawiyay in ay ku dhamasyatay kaalinta labaad ee La liga oo ay Real Madrid ka sare mareen markaas oo ay Barca koobka ku guulaystay.
Bernd Schuster ayaa Atletico Madrid u saftay 10 kulan oo tartamada Yurub ah isaga oo aan wax goolal ah u dhalin halka uu Real Madrid u saftay 12 kulan oo tartamada kooxaha Yurub ah wuxuuna soo dhaliyay 4 gool.
Riix 2,3 si aad xogtan oo dhamaystiran u akhrisato.
Santiago Solari: Tababaraha hadda ee kooxda Real Madrid ayaa ah xidig kale oo u soo wada ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Atletico madrid. Bishii January 1999 kii kooxda Atletico Madrid ayaa Soliri kala soo wareegtay kooxda reer Argentina ee River Plate laakiin xili ciyaareedkii ugu horeeyay ee uu Solari ku qaatay Atletico Madrid ayay heerka labaad u dhaceen.
Laakiin kadib tababarihii Real madrid ee Vicente del Bosque ayaa Solari kala soo wareegay Atletico Madrid wuxuuna xili ciyaareedkiisii kowaa ee Madrid uu kula soo guulaystay koobka horyaalka La Liga wuxuuna Solari ciyaaray 90 kiidaqiiqo ee finalkii Champions league ee ay Madrid sanadkii 2002 ku garaacday Bayer Leverkusen.
Solari ayaa sanadkii 2003 waxa uu ku biiray Inter Milan laakiin marklae sanadkii 2013 kii ayuu Bernabeu dib ugu soo laabtay isaga oo ugu danbayn sanadkii 2018 kii noqday macalinkii badaly Julen Lopetegui oo shaqada laga caydhiyay.
Laakiin Solari ayaa Atletico Madrid u soo saftay 8 kulan oo tartamada kooxaha Yurub ah isaga oo aan wax goolal ah u dhalin laakiin Real Madrid oo uu 51 kulan oo tartamada Yurub ah uu u ciyaaray waxa uu ku soo dhaliyay 7 gool.
Raúl González: Waa mid ka mid ah halyayda ugu magaca wayn kooxda Real Madrid isla markaana ayna ilaa hadda jamaahiirta Madrid ilaawi karin waqtigii uu kooxdooda ku soo qaatay laakiin Raul ayaa ka soo baxsaday faraha kooxda Atletico Madrid si uu halayay ugu noqdo Real Madrid.
Kooxda Atletico Madrid ayaa sanadkii 1974 kii waxay si xor ah ku sii daysay Rual kadib markii uu dhaawacyo ka bixi waayay wuxuuna markaas ka tirsanaa kooxdeeda da’yarta laakiin Raul ayaa noqday ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee Real Madrid u saftay isaga oo 17 sano iyo 124 maalmood oo kaliya ugu ciyaaray kooxda kowaad.
Wixii intaas ka danbeeyay taariikh ayay noqotay wuxuuan Raul awooday in uu Real Madrid kula soo guulaystay saddex koob oo Champions League ah, lix koob oo La Liga ah, wuxuuna Madrid u soo ciyaaray 323 kulan isaga oo ahaa xidiga rekoodhkan haystay intii aanu Cristiano Ronaldo ka jabin.
Raul ayaan hal kulan oo tartamada yurub ah u soo ciyaarin kooxdiisii carruurnimo ee Atletico Madrid laakiin waxa uu Madrid u soo saftay 132 kulan oo tartamada kooxaha Yurub ah wuxuuna u soo dhaliyay 66 gool.
Previous: Haatan Waxaan Dareemayaa Nafis, Imika Waa Wakhtigii De Ligt – Frankie De Jong Oo Kaftan Ku Tuuray De Ligt & Sida Ay Saxaafada Khaatiga Uga Istaageen Oo Ay Qirteen.
Next: Manchester United Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Laacibka Heshiiskiisu Dhamaadka Yahay Ee Juan Mata Oo Ay Raadinayaan Barcelona Iyo Arsenal